JW Library: Hanoritra Teny (Android) | JW.ORG Fanampiana
Fanontaniana Fametraky ny Olona: JW Library (Android)
Fanontaniana Fametraky ny Olona: JW Library (iOS)
Fanontaniana Fametraky ny Olona: JW Library (Windows)
Afaka manoritra teny na fehezanteny ianao, rehefa mianatra sy mamaky boky na zavatra hafa ao amin’ny JW Library.
Araho ireto toromarika ireto rehefa hanoritra teny:
Hanova ny lokon’izay nosoritana
Misy fomba roa azonao atao raha te hanoritra teny ianao.
Tsindrio elaela ny teny iray fidinao. Azonao akisaka mankany aloha na mankany aoriana ny sisiny amin’ilay teny, mba hifidianana an’ireo teny tianao hosoritana. Hisy sokajy maromaro hiseho avy eo. Tsindrio ilay hoe Surligner, ary fidio izay loko tianao hampiasaina.
Azo atao koa anefa ny hoe tsindrianao elaela kely ny teny iray sady akisakao ihany ny rantsantananao, raha tianao ny hanoritra teny na fehezanteny. Tonga dia hiloko daholo izay teny nofidinao. Hiseho vetivety avy eo ilay sokajy maromaro. Azonao ovana ilay loko na koa esorina izay efa nolokoanao.
Tsindrio ny teny nosoritanao, raha tianao hovana ny lokony. Fidio avy eo izay loko hafa tianao. Tsindrio ny teny nosoritanao, ary avy eo ilay hoe Supprimer, raha tianao hesorina izay efa nolokoanao.
Tao amin’ilay JW Library 1.6 nivoaka tamin’ny Novambra 2015 no nisy an’ireo zava-baovao ireo. Mandeha tsara amin’ny Android 4.0 na taorian’izay izy ireo. Raha tsy mahita an’ireo zava-baovao ireo ianao, dia jereo ilay hoe “Mampiasà JW Library: iOS,” ao amin’ilay hoe Fanavaozana farany.